Nhicha ihe iPod - otú ihe mere nke Ọ p
Ọtụtụ n'ime anyị Apple hụrụ na iPods bụ otu n'ime ndị na ngwaọrụ na onye ọ bụla mkpa. iPods, na-ewu ewu ntụrụndụ ngwaọrụ site na Apple, bụ otu na ọ music n'anya chọrọ nwere. Ọ bụ ezie na ha na-ele sleek na sturdy, i kwesịrị ịnọgide na-enwe ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị dị ka ha nwere ike ina mebiri emebi n'ezie ngwa ngwa. Ịnọgide na-enwe, ị ga-ọcha gị ngwaọrụ mgbe nile, nke mere na ọ na retains ya mma. E nwere akụkụ dị iche iche i nwere na-obibi dị ka ihuenyo, azụ, earbuds, ekweisi, headphone Jack na ikpe.
Part 1. Olee ọcha ihe iPod ihuenyo
The ihuenyo mmetụ bụ kasị eji akụkụ nke ị iPod. Ọ bụrụ na mkpịsị aka gị na-mmanụ ma ọ bụ sweaty nọgide na-, na ihuenyo ga-ebu ibu nke ya oke. Ị ga na-gị na ihuenyo dị ọcha, mmanụ free na mmiri free. Ebe a bụ otú i nwere ike na-elekọta gị na ihuenyo:
Ihe mbụ ị ga-eme bụ ịkwụpụ niile cables, na gbanyụọ gị iPod. Iji na dị nnọọ pịa jide ụra ma ọ bụ eteta button mgbe ahụ Mia onscreen mmịfe.
Ugbu a na-eji a adụ, keguru mmiri, na lint-free ákwà.
Hichaa ihuenyo na okirikiri ngagharị.
Mgbe eji ezinụlọ cleaners, abịakọrọ ikuku, amonia, aerosol, ma ọ bụ ndị ọzọ cleaners ọcha ihuenyo. Jide n'aka na ị na-adịghị emetụ oghere na keguru mmiri ákwà.
Part 2. Olee ọcha azụ nke ihe iPod
Dị nnọọ ka ihuenyo, azụ nke ihe iPod nwekwara ike ịbụ griiz na unyi. I nwekwara ike iji otu usoro ọcha azụ nke ihe iPod dị ka ihuenyo. Otú ọ dị, ihe dị mkpa na-elekọta bụ izere ihe ọ bụla oghere dị ka headphone Jack ma ọ bụ mmịfe. Ị na-achọghị mmiri ịbanye n'ime ahu nke iPod. Lee ndị nzọụkwụ na-eso mgbe nhicha azụ nke ihe iPod:
Ịkwụpụ niile cables si iPod na-atụgharị nke ngwaọrụ eji wakeup / ụra bọtịnụ.
Were a adụ, keguru mmiri, na lint-free uwe. Ọcha azụ i nwere ike iji cleaners eji maka nhicha kọmputa, LCD ma ọ bụ ekwentị meziri.
Ugbu a ọcha ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị, jide n'aka na ọ bụ akọrọ mgbe ọcha. Ọ bụrụ na o kwere omume ojiji akọrọ ákwà lint-free ákwà iji kpochapụ ihe dampness.
Mgbe ọ bụla ị na-eji iPod jide n'aka na ị na-eji akọrọ na ọcha aka, iji zere mmanụ, ọsụsọ ma ọ bụ unyi na azụ nke iPod.
Part 3. Olee ọcha iPod earbuds
Na mgbe nile were, earbuds aga site otutu. Ọ na-gụrụ unyi, bacteria na mmanụ na otú kwesịrị na-elekọta. Ọ bụrụ na ị na-eji ihe ntị nwa osisi ruo ogologo oge na-enweghị nhicha ya, ị ga-ahụ unyi akwakọba ihe ntị buds. Isi iyi nke unyi nwere ike ịbụ na ọtụtụ ndị. Ọtụtụ n'ime anyị na-eji earbuds mgbe n'ụzọ, na-arụ ọrụ, ma ọ bụ mgbe na mgbatị Earbuds pụrụ ibufe emerụ bacteria ma ọ bụ ọrịa ma ọ bụrụ na-akọrọ si onye onye. N'ihi ya, ọ dị mkpa na-earbuds ọcha. Ebe a na-ole na ole nzọụkwụ na ị pụrụ ịgbaso na-ha dị ọcha.
Jiri nwayọọ Cleaner dị ka mmiri ọkụ ma ọ bụ ncha. Sook a nwayọọ ákwà na ya na ọcha ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Jide n'aka na ị na-adịghị ahapụ mmiri ma ọ bụ na-emepụta ncha, ọ ga-emerụ maka wiring.
Ọ bụrụ na e otutu unyi ma ọ bụ metal, na-agbalị iji a nwayọọ ahịhịa. Atu ga-abụ ezigbo echiche ọcha ájá.
Ọ bụrụ na gị earbud bụ mbughari ahụ na-agbalị wepụ ya na ọcha ya iche iche.
Zere ukwuu mmiri ma ọ bụ mmiri n'ime ntị nwa osisi mgbe nhicha. Ka ọ na akọrọ mgbe nhicha.
Part 4. Olee otú ọcha iPod ekweisi
Ekweisi ndị yiri earbuds na ha na-aga site n'otu ọnọdụ. Ị nwere ike iji otu ihicha usoro dị ka n'elu. Lee ndị nzọụkwụ na ị pụrụ ịgbaso:
Mix ụfọdụ nwayọọ omo na mmiri ọkụ. Jiri a nwayọọ ákwà ma belata ya na ya.
Ehichapụkwa ekweisi. Ọ bụrụ na ọ nwere sịlịkọn mbughari mkpuchite, wepụ ya ma hichaa ha iche iche.
Ọ bụrụ na ọ chọrọ ọtụtụ ihicha, na-eji mmanya ma na-eji Q-n'ọnụ.
Part 5. Olee otú ọcha a headphone Jack
E nwere ike ịbụ njikọ nsogbu, nke nwere ike ime ekwekọghị music ahụmahụ. The Jack kwesịrị kpochara anya ka unyi. Ebe a na-ole na ole nzọụkwụ na ị pụrụ ịgbaso iji jide n'aka na ị nwere ezi njikọ:
Were ikuku nwere ike na fụpụ ájá na lint, nke Nwela chịkọbara ke ofụri.
Ị nwere ike iji Q-n'ọnụ ọcha ya. Jide n'aka na ị na-eji ya nke ọma na-enweghị na-ahapụ ihe ọ bụla owu Strand ke ofụri.
Were akwụkwọ clip na-agbatịnụ ya. Ugbu a na-eji mgbe nile teepu na kechie gburugburu ya nnyapade n'akuku elu. jide n'aka na ọ na-ike enịm. Iji dọpụtaara irighiri ma ọ bụ lint.
Part 6. Olee otú ikpochapụ iPod ikpe
Ọtụtụ na-eji iPod ikpe iji chebe iPod si ájá, mmanụ na lint. Dị ka a n'ihi na mkpuchi ime na-enwe ntakịrị unyi, lint wdg Otú ọ dị, ị na-adịghị ọcha mgbe niile, o nwere ike kwatara akwata na cover ma ọ bụ na-ọ gaghị adị mma ka i ike. E nwere ihe abụọ na ụdị nke ikpe na-enye site Apple, Silicon dabeere na akpụkpọ anụ dabeere. Ma na-achọ ọgwụgwọ dị iche iche.
Silicone dabeere ikpe
Always wepụ ngwaọrụ site na ikpe. Jiri adụ, keguru mmiri, lint-free ákwà na-ehichapụ n'èzí na n'ime nke ikpe. Adịghị mgbe o jiri cleaners ị na-eji ụlọ. Ọ bụrụ na o kwere omume ojiji kọmputa na ihuenyo cleaners.
Akpụkpọ anụ ikpe
The anya nke ọ na-agbanwe na oge ruru ka ìhè, na mmanụ. Na iji ọcha ya, na-eji dị ọcha ákwà na mmiri ọkụ na nke dị nwayọọ ncha dị ka aka na-asacha. Ị nwere ike iji akpụkpọ anụ cleaners na conditioners ịnọgide na-enwe agba nke akpụkpọ anụ.
> Resource> iPod> Nhicha ihe iPod - otú ihe mere nke Ọ